Warshadda Shiinaha Villa Design iyo soosaarayaasha | Zhenyuan
Villa:waa kordhinta ugufiican ee deganaanshaha qoyska, waa magac ubixida raaxada, dhamaadka-sare, gaar ahaaneed iyo hanti. Waa degsiimooyin jardiin oo laga dhisay xaafad ama aag muuqaal ah oo lagu madadaalo. Waana meel lagu raaxeysto nolosha.
Waxaa guud ahaan la fahamsan yahay, marka lagu daro shaqada aasaasiga ah ee "noolaanshaha", inay tahay degganaan waayeel oo inta badan ka tarjumeysa tayada nolosha iyo astaamaha raaxada. Macnaha casriga ah, waa deggenaansho qaab-dhismeed madax-bannaan oo madax-bannaan, oo lagu dhisay dhismayaal madax-bannaan.
Villas waxaa loo qaybiyaa shanta nooc ee soo socda: Villas-hal qoys ah, guryo-magaalo, laba villa, villa-yo dusha sare ah, villa-cirka.
* Villa hal guri
Taasi waa, hal barxad oo leh meel madax bannaan oo dusha sare ah iyo dhulka beerta gaarka loo leeyahay ee hoose waa villo gaar loo leeyahay, oo loo muujiyey inay tahay meel madax bannaan oo ku wareegsan dhinacyada sare iyo hoose. Guud ahaan, waxaa ku yaal Meelo cagaaran iyo barxado leh meelo kala duwan oo guriga ku wareegsan.Goob noocaan ah waa mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn, qarsoodi adag, qiimaha suuqyada sare, sidoo kale waa qaabka ugu dambeeya ee dhismaha villa.
* Laba aqal
Waa badeecada dhexdhexaadka ah ee udhaxeysa aqalka magaalada iyo villa gooni u goosadka ah, oo ka kooban laba qaybood oo ka mid ah guryaha magaalada. Guriga ugu caansan ee 2-PAC ee ku yaal Mareykanka waa nooc ka mid ah guri laba-parquet ah. Yaraynta cufnaanta bulshada iyo Kordhinta dusha iftiinka guriga waxay ka dhigeysaa meel banaanka ka ballaaran. Laba jibaarista villa ayaa asal ahaan ah 3 dhinac oo iftiin leh, qolka jiifka ee banaanka wuxuu yeelan karaa laba waji oo ka sarreeya iftiinka caadiga ah, guud ahaan marka la hadlayo, daaqadda ayaa ka sii badan, hawo ma leh liidata, muhiim waa iftiin maalin iyo muuqaal.
* Guryaha magaalooyinka
Waxay leedahay barxad iyo garaash u gaar ah.Waxay ka kooban tahay seddex qaybood ama kabadan, oo iskuxira iskudhaf laba ilaa afar dabaq ah, qayb walbana waxay wadaageysaa derbi bannaanka, oo leh naqshad qaabaysan oo midaysan iyo bog gaar ah. in guryaha dhaqaale ee ugu badan ay qaataan.
* Guryaha isku laabma
Waa kordhinta dhismaha magaalada, inta udhaxeysa villa iyo aqalka, wuxuu ka kooban yahay aqallo dabaqyo badan leh oo dabaqyo kala duwan leh oo ka kooban kor ilaa hoos Guud ahaan afar illaa toddobo dabaq, oo ka socda cutub kasta oo ka kooban laba illaa saddex dabaq oo villa ah kor ilaa hoos, marka la barbardhigo guryaha magaalooyinka, tusaalaynta dusha sare ee madaxbannaan waxay noqon kartaa mid hodan ah, iyo illaa xad si looga gudbo cilladaha guryaha magaalooyinka oo cidhiidhi ah oo qoto dheer.
* Villa ku jira Cirka
Sky villa wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Mareykanka, oo loo yaqaan "penthouse" ama "attic sky" asal ahaan waxaa loola jeedaa guri qaali ah oo ku yaal bartamaha magaalada, dusha sare ee sare. Guud ahaan waxaa loo fahamsan yahay inuu yahay deggane weyn / dabaq weyn waxaa lagu dhisay guri dabaq ah ama dhismo dhaadheer oo qaab villa ah. Badeecooyinka loo baahan yahay waxay la jaan qaadayaan shuruudaha aasaasiga ah ee muuqaalka guud ee villa, oo leh deegaan juquraafi ahaan wanaagsan, aragti ballaadhan, hufnaan iyo wixii la mid ah.
Laga soo bilaabo qaab dhismeedka, muuqaalka villa ayaa horey u jebiyey xuduudihii gobolada iyo qarankaba, qaab dhismeedka dhismaha villa ee aduunka ee ka jira suuqa villa Shiinaha ayaa si aad ah uga muuqda.
Bixinta guryaha villa
Sare u qaadida hore ee villa
Sare u qaadida dhinaca villa
Hore: Fasalka qaab dhismeedka xuubka
Xiga: Nooca warshadda wax soo saarka warshadaha
Naqshadaynta Villa Gaarka ah
Naqshadeynta Qaab-dhismeedka Birta Villa
Naqshadeynta Qaabdhismeedka Qaab-dhismeedka Villa